Cristinao Ronaldo → Chelsea, Eden Hazard → Real Madrid, Joe Hart → Ac Milan, Alex Oxlade-Chamberlain → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku – Kooxda.com
Home 2017 June Suuqa, Wararka Maanta Cristinao Ronaldo → Chelsea, Eden Hazard → Real Madrid, Joe Hart → Ac Milan, Alex Oxlade-Chamberlain → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
Cristinao Ronaldo → Chelsea, Eden Hazard → Real Madrid, Joe Hart → Ac Milan, Alex Oxlade-Chamberlain → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
June 18, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Tababaraha kooxda Man City pep Guardiola ayaa saxiixiisii 3-aad ka dhigan doona daafaca kooxda Juventus ee Dani Alves kaas oo qarka u saaran in uu tababaraha reer Spain kula midoobo Man City (The Sun).
Goolhayaha 2-aad ee kooxda Liverpool Loris Karius ayaa xiiso waali ah ka helay kooxda reer Germany ee Augsburg (The Sun).
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay in ay si deg-deg ah ku soo xero galiyaan xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Alex Oxlade-Chamberlain (Daily Mirror).
Kooxda Bayern Munich ayaa ka cabsi qabta in uu Alexis Sanchez kooxdiisa Arsenal ku qasbo in xagaagan laga iibiyo kooxda Man City (Daily Mirror).
Cristinao Ronaldo ayaa kaliya sii joogi doonaa kooxda Real Madrid wixii ka dambeeya xagaagan hadii ay ka bixiyaan lacagta dhan 13 Milyan ee cashuurta Ah (Daily Mirror).
Kooxda Man United ayaa ka cabsi qabta in ay Kooxda chelsea ka afduubato weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Alvaro Morata (Daily Mirror).
Kooxda Atletico Madrid ayaa dalab ka soo gudbinaysa weeraryahanka kooxda chelsea ee Diego Costa todobaadkan inkasta oo ay ka ganaaxan tahay suuqa kala iibsiga (Daily Mirror).
Kooxda chelsea ayaa tababare Antonio conte ku riixaysa heshiis cusub in kasta oo uu khilaaf soo kala dhex galay maamulka sare ee kooxda iyo Isaga (Daily Mail).
Kooxda Real Madrid ayaa Cristiano Ronaldo u ogolaan doonta in uu isaga tago kooxda kaliya hadii ay kooxda doonaysa miiska saarto lacag dhan 350 Milyan oo euro (Daily Mail).
Man City ayaa bixin doonta mushaharaad dhan 500,000 Milyn oo Gini oo ay siin doonto xiddigaha Joe Hart,Samir Nasi iyo Wilfried Bony ilaa ay iska iibiso xagaagan mooyaane (Daily Mail).
Mustaqbalka cristiano Ronaldo ayaa xal laga gaari doonaan kadib marka ay miiska wadahadalada wada fariistaan wakiilka xiddiga iyo Madaxweynaha Kooxda ee Florentino Perez (Daily Mail).
Milkiilaha kooxda chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya in ay Real Madrid is weydaarsadaan xiddigaha Cristiao Ronaldo iyo Eden Hazard (Daily Star).
Kooxda Bayern Munich yaa isku diyaarinaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa daafaca kooxda Tottenham ee Kyle Walker iyada oo doonaysa in ay saxiixiisa ku garaacdo Man City (Daily Star).
Kooxda Ac Milan ayaa doonaysa in ay u dhaqaaqdo Goolhae Joe Harta Si ay ugu badasho Goolhayaha baxsadka ka ah kooxda ee Gigio Donnarumma (Daily Star).
Mohamed Salah Ayaa tijaabada caafimaadka u mari doona kooxda Liverpool Maalinta salaasada ah ee soo socda xilli la filayo in laga heshiiyo qiimaha uu ugu biiray kooxda Anfield ku ciyaarta (Tutto Sport)